Xisbiga Dimuquraadiga oo ku dhawaaqay Murashaxooda Rasmiga ah ee Hillary Clinton – The Voice of Northeastern Kenya
Xisbiga Dimuquraadiga oo ku dhawaaqay Murashaxooda Rasmiga ah ee Hillary Clinton
Shirweynaha Xisbiga Dimuquraadiga Maraykanka ee ka socda magaalada Philadelphia ee dalka Maraykanka ayaa xalay si rasmi ah looga dhawaaqay in Murashaxda Hillary Clinton ay tahay murashaxa rasmiga ah ee xisbigaasi.
Senator Bernie Sanders oo isagu ahaa murashaxii sida weyn u la loolamay Hillary Clinton ayaa isagu khudbad u jeediyey ka sheegay in aan loo baahneyn in la raaco nidaamkii ahaa tirinta cododka murashaxiinta ay ka kala heleen codbixintii ka dhacday gobalada oo si rasmi ah loogu gudbo magacaabida Murashaxa Rasmiga ah oo loo caleemo saaray Mrs.Hillary Clinton.
Doorashada Xisbiga Dimuquraadiga ee Hillary Clinton inay murashaxooda rasmiga ah noqoto ayaa ah markii ugu horeysay ee xisbiyada dalka Maraykanka uu murashax u noqday qof dumar ah, arrintaasi ay sidoo kale ka hadashay Hillary Clinton oo xalay khudbad dhanka muuqaalka ah u soo gudbisay ergada shirkaasi ku sugan, waxana lagu wadaa in khudbadeeda rasmiga ah soo jeediso xiritaanka shirka.
Waxaase furitaanka shirkan Dimuquraadiga ka muuqday khilaaf xoogleh iyadoo in badan oo kamid ah tageerayaasha Murashaxii laga guuleystay ee Senator Bernie Sanders ay si weyn u diidanaayeen inay tageeraan Hillary Clinton, waxayna ku buuqeen furitaanka shirka khudbadii uu halkaasi kasoo jeediyey Bernie Sanders oo taageerayaashiisa ka codsaday inay tageeraan Mrs.Clinton.
Khudbadihii shirka illaa iyo hada laga soo jeediyey waxaa si weyn dadka u soo jiitay khudbadii Marwada Madaxweynaha ee Michelle Obama oo hadalo qiiro leh halkaasi kasoo jeedisay iyadoo ay dhamaan ergada halkaasi ku sugan iyo dadkii telefishinada ka daawaday ay si weyn ugu riyaaqeen.
Madaxweynihii hore Bill Clinton ayaa isaguna xalay khudbad shirka kasoo jeediyey isagoo si weyn u ammaanay xaaskiisa oo uu ku tilmaamay qof wax weyn u qaban doonta dalka Maraykanka isla markaana ay tahay qof isbedal doon ah.
← Ciidamada Konfurta Sudan oo eedeyn dusha looga tuuray
Kooxo hubeysan oo dhaawac u geystay askari ka tirsan booliska →